मिथक : भगवान् विष्णु र लक्ष्मी ४ महिनासम्म सुत्ने ‘क्षीर सागर’ कहाँ पर्छ ? « News24 : Premium News Channel
- राजेन्द्र तारकिणी
काठमाडाैँ । विष्णु पुराणका अनुसार भगवान् विष्णु र उनकी पत्नी सुत्ने सागरलाई क्षीर सागर भनिन्छ । क्षीर अर्थात दूधको सागर के हो ? त्यो कहाँ थियो वा छ ? के यो सत्य हो वा कुनै मिथ मात्र हो ? यस्ता अनेक जिज्ञासा तपाईंको मनमा पनि उत्पन्न भयो होला ।